Milan oo Suso ku macaanaynaysa heshiiska Mateo Musacchio – Gool FM
Milan oo Suso ku macaanaynaysa heshiiska Mateo Musacchio
Raage July 10, 2016
(Milano) 10 Luulyo 2016 – AC Milan ayaa u dhow inay soo qaadato gaashaanka Mateo Musacchio oo daafaca uga dheela Villarreal iyagoo doonaya inay heshiiska ku daraan laacibka Suso si ay u dhimaan kaashka ay dalbanayso Villareal oo ah €30m oo euro.
Kooxda Rossoneri ayaa wada xaajood meel wanaagsan maraya kula jirta naadigan Spanish-ka ah iyagoo daafaca Musacchio ku doonaya €25m oo euro.
Waxaa laacibkan ku xiran shuruud ah €50m oo euro oo lagu kansali karo heshiiskiisa, balse way ogol yihiin in €30m laga siisto.
Sida uu qarayo Corriere dello Sport, farqiga u dhexeeya yabooha iyo dalabka waxaa lagu daarin karaa heshiiska oo lagu daro laacibka da’da yar ee Suso oo isaga lagu qiimeeyo 10 milyan oo euro, waloow uu Vincenzo Montella la dhacsan yahay laacibkan misna wuu u huri karaa Musacchio oo uu aad u doonayo.
Icardi & afadiisa oo Atletico la xaajoonaya!
Barcelona oo go'aan kama danbays ah ka sugaysa Claudio Bravo